Umgomo Wamakhukhi - UFranchiseek | Amathuba weFranchise
Lewebhusayithi www. .ivideo.com ("Isayithi lethu") lisebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo ukuze ukuhlukanise nabanye abasebenzisi. Ngokusebenzisa amakhukhi, Sikwazi ukukunikeza isipiliyoni esingcono futhi sithuthukise indawo yethu ngokuqonda kangcono ukuthi uyisebenzisa kanjani. Sicela ufunde le Nqubomgomo yamakhukhi ngokucophelela futhi uqinisekise ukuthi uyayiqonda. Ukwemukelwa kwakho kwenqubomgomo yethu yekhukhi kuthathwa njengokuthi uma kwenzeka uvakashela futhi udlulisa amehlo kusayithi lethu. Isayithi lethu lisebenzisa iribhoni yamakhukhi ezansi kwewebhusayithi ekuhambeleni kwakho kokuqala. Uma ungavumelani nenqubomgomo yethu yekhukhi, sicela uyeke ukusebenzisa isayithi lethu ngokushesha.
1.1 Kule Nqubomgomo ye-Cookie, ngaphandle uma umongo ngenye indlela ufuna, izinkulumo ezilandelayo zinencazelo elandelayo:
"Ikhukhi" kusho ifayela elincane elibekwe kwikhompyutha yakho noma kudivayisi yakho yiSayithi lethu lapho uvakashela izingxenye ezithile zeSayithi lethu kanye / noma lapho usebenzisa izici ezithile zeSayithi lethu;
"Umthetho We-Cookie" kusho izingxenye ezithintekayo Zemithetho Yobumfihlo ne-Elektroniki Yezokuxhumana (EC Directive) Regisl 2003 kanye ne-EU Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”);
"Imininingwane yomuntu" kusho noma imuphi imininingwane nayo yonke imininingwane ephathelene nomuntu okhonjwa ongakhonjwa ngokuqondile noma ngokungaqondile kuleyo datha, njengoba kuchazwe yi-Data Protection Act 1998 OR Umthethonqubo we-EU 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”);
"Si / thina / eyethu" kusho i-Infinity Business grow Network Ltd., inkampani elinganiselwe ebhaliswe eNgilandi ngaphansi kwenombolo yenkampani 09073436, ikheli layo elibhalisiwe liyi-2 Bromley Rd. I-Seaford, i-East Sussex, i-BN25 3ES, nekheli layo lokuhweba eliyisihambeli.
1.1 Isayithi lethu liphethwe futhi liphethwe yi-Infinity Business Ukukhula Inethiwekhi, inkampani elinganiselwe ebhalisiwe eNgilandi ngaphansi kwenombolo yenkampani 09073436, ikheli layo elibhalisiwe liyi-2 Bromley Rd. I-Seaford, i-East Sussex, i-BN25 3ES, futhi ikheli layo eliyinhloko lokuhweba lingaphezulu.
1.2 Inombolo Yokubhalisa ye-VAT 252 9974 63
1.3 Umphathi Wethu Wokuvikela imininingwane nguJoel Bissitt, futhi angathintwa nge-imeyili ku [Email protected], ngocingo ku-01323 332 838, noma ngeposi ku-2 Bromley Road, Seaford, East Sussex, BN25 3ES
Asetshenziswa Kanjani Amakhukhi wethu?
1.1 Isayithi lethu lingabeka futhi lifinyelele amakhukhi eqembu lokuqala kukhompyutha noma kudivayisi yakho. Amakhukhi weqembu lokuqala yilawo abekwe kithi ngqo futhi asetshenziswa Yithi kuphela. Sisebenzisa amakhukhi ukwenza futhi sithuthukise umuzwa wakho weSayithi lethu futhi unikeze futhi uthuthukise izinsizakalo zethu. Sikhethe ngokucophelela la ma-Cookies futhi sathatha izinyathelo zokuqinisekisa ukuthi ubumfihlo bakho kanye nemininingwane yomuntu siqu kuyavikelwa futhi kuyahlonishwa ngaso sonke isikhathi.
1.2 Ngokusebenzisa isayithi lethu, futhi ungathola amaKhukhi wesithathu ekhompyuter yakho noma kudivayisi. Amakhukhi wenkampani yesithathu yilawo abekwe amawebhusayithi, izinsizakalo, kanye / noma amaqembu ngaphandle kwethu. Amakhukhi wenkampani yesithathu asetshenziswa Esizeni Sethu Sokufaka Ukusetshenziswa Kusetshenziswa Amakhukhi we-Okwesithathu, isib. Ngemininingwane engaphezulu, sicela ubheke isigaba 4 ngezansi.
1.3 Onke amakhukhi asetshenziswa yiSayithi lethu asetshenziswa ngokuya ngomthetho wamanje wamakhukhi. Singasebenzisa ezinye noma zonke izinhlobo ezilandelayo ze-Cookie:
3.a.1 Amakhukhi Abalulekile
Ikhukhi liwela kulesi sigaba uma libalulekile ekusebenzeni kweSayithi lethu, ukusekela imisebenzi efana nokungena ngemvume, kubhasikidi wakho wokuthenga, nokukhokha okwenziwayo.
3.a.2 Amakhukhi wokuhlaziya
Kubalulekile kithi ukuba siqonde ukuthi usebenzisa kanjani isayithi lethu, ngokwesibonelo, ukuthi uyakwazi kangakanani ukuzulazula kulo, nokuthi yiziphi izici ozisebenzisayo. Amakhukhi we-Analytics asenza sikwazi ukuqoqa lolu lwazi, sisisize ukuba sithuthukise isayithi lethu kanye nolwazi lwakho ngalo.
3.a.3 Amakhukhi wokusebenza
Amakhukhi wokusebenza asenza sikwazi ukukunikeza imisebenzi eyengeziwe kuwe kusayithi lethu njengokukwenza komuntu siqu nokukhumbula okuthandayo. Amanye amakhukhi wokusebenza angasebenza futhi nangamakhukhi adingekayo, kepha hhayi wonke lawo maqembu angena kuleso sigaba.
3.a.4 Ukuqondisa Amakhukhi
Kubalulekile kithi ukuba sazi ukuthi uvakashela kangaki iSayithi lethu futhi kangaki, nokuthi usebenzise ziphi izingxenye zalo (kufaka phakathi amakhasi owavakashele nokuthi uwaxhumanise). Njengamakhukhi wokuhlaziya, lolu lwazi lusisiza ukukuqonda kangcono futhi, futhi, ukwenza isayithi lethu nokukhangisa kuhambisane kakhulu nezintshisakalo zakho. Eminye imininingwane eqoqwe ngokuqondisa ama-Cookies nayo ingabiwa nabantu besithathu.
3.a.5 Amakhukhi weqembu lesithathu
Amakhukhi wenkampani yesithathu awabekwa Us; esikhundleni salokho, zibekwa ngabantu besithathu abahlinzeka ngezinsizakalo kithi kanye / noma kuwe. Amakhukhi wenkampani yangaphandle angasetshenziswa izinsizakalo zokukhangisa ukukuhlinzekela ukukhangisa okwenzelwe wena kusayithi lethu, noma amaqembu esithathu anikezela ngezinsizakalo zokuhlaziya Kithi (la ma-Cookie azosebenza ngendlela efanayo nama-Cookyt Cookies achazwe ngenhla).
3.a.6 Amakhukhi Aqhubekayo
Noma yiziphi izinhlobo ezingenhla ze-Cookie zingaba ikhukhi eliphikelelayo. Amakhukhi aqhubekayo yilawo ahlala kukhompyutha noma kudivayisi yakho isikhathi esinqunyelwe futhi asebenza ngaso sonke isikhathi uma uvakashela isayithi lethu.
3.a.7 Amakhukhi eSeshini
Noma yiziphi izinhlobo ezingenhla ze-Cookie ezingaba ikhukhi leseshini. Amakhukhi weSeshini angawesikhashana futhi ahlala kukhompyutha noma kudivayisi yakho kusuka endaweni lapho uvakashela isayithi lethu uze uvale isiphequluli sakho. Amakhukhi wesikhathi ayasuswa lapho uvala isiphequluli sakho.
1.4 Amakhukhi esizeni sethu awapheli futhi azophelelwa yisikhathi njengoba kukhonjiswe kuthebula elingezansi.
1.5 Ngemininingwane engaphezulu yemininingwane yomuntu siqu Esiyiqoqayo nesiyisebenzisayo, izinyathelo esinazo zokuvikela idatha yomuntu siqu, amalungelo akho omthetho, kanye nezibopho zethu zomthetho, sicela ubheke inqubomgomo yethu yobumfihlo lapha.
1.6 Ngemininingwane ethile yamakhukhi esiwasebenzisayo, sicela ubheke ithebula elingezansi.
Amakhukhi weqembu lokuqala angabekwa kukhompyutha noma kudivayisi yakho:
Igama le-Cookie Injongo Kuyadingeka Kakhulu
ISESI Idaliwe futhi ihlala ngenkathi ungene ngemvume. Iyadingeka ukuze ungene ngemvume, kuze kube yilapho uphuma. Igcinwe inyanga engu-1 Yebo
Qopha ikhasi lokufika, nomthombo wokuvakasha kwakho, osetshenziselwa ukuhlaziya nokulandela umkhondo ukusisiza ukuthi sikhombe lapho ithrafikhi yethu ivela khona, ngokuchofoza kusixhumanisi nokuxhumana. Igcinwe izinyanga eziyisithupha Yebo
futhi amakhukhi wesithathu alandelayo angabekwa kukhompyutha noma kudivayisi yakho:
I-Google Inc I-Google Universal Analytics yokulandela abasebenzisi nokulandela ithrafikhi kuwebhusayithi yethu Kusetshenziselwe ukukhomba ukuthambekela kwethrafikhi futhi kusisiza ukuba sithuthukise ukutholakala ngokulula kuwebhusayithi. Ihlala isikhathi esingaphansi kwamahora angama-24. I-ID eyingqayizivele evuselelwa ngenkathi upheqa iwebhusayithi.
_ga I-Google Inc Ukulandela ngomkhondo kweGoogle Analytics, okusetshenziselwa ukulandela ukuvakasha kule webhusayithi nokukhomba amaphethini nezindlela zokuhamba ezungeza isiza, futhi okusetshenziswa yithina ukusiza ekuzuleni ukuzungeza iwebhusayithi futhi ukukhomba imithombo yethrafikhi yethu yewebhu.
I-Google Inc Kusetshenziselwe ukusiza amakhukhi weGoogle Analytics angenhla ngenkathi ephequlula ku-mobile.Persists izinyanga eziyisithupha
Isayithi lethu lisebenzisa izinsizakalo zokuhlaziya ezinikezwe ngabakwaGoogle Analytics. Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kubhekiswa kusethi yamathuluzi asetshenziselwa ukuqoqa futhi ahlaziye imininingwane yokusetshenziswa engaziwa, kusenza Sazi ukuqonda kangcono ukuthi isiza sethu sisetshenziswa kanjani. Lokhu-ke, kusenza sikwazi ukuthuthukisa isiza sethu nemikhiqizo kanye / noma nezinsizakalo ezinikezwa ngayo. Akudingeki ukuthi usivumele ukuthi sisebenzise la makhukhi, noma kunjalo ukusebenzisa kwethu wona akubeki engcupheni yobumfihlo bakho noma ukusetshenziswa kwakho okuphephile kweSayithi lethu, kusenza sikwazi ukuqhubeka nokwenza ngcono isayithi lethu, sikwenze kube ngcono nokuningi. isipiliyoni esiwusizo kuwe.
Insizakalo yokuhlaziya esetshenziswe Ama-Webhusayithi Wethu ukusebenzisa ama-cookie ukuqoqa imininingwane edingekayo.
Insizakalo yokuhlaziya esetshenziswa abasebenzisi beSayithi lethu amaKhukhi alandelayo:
Igama le-Cookie Okokuqala / Okwesithathu
Okwesithathu I-Google Inc Ukulandela ngomkhondo kweGoogle Analytics, okusetshenziselwa ukulandela ukuvakasha kule webhusayithi nokukhomba amaphethini nezindlela zokuhamba ezungeza isiza, futhi okusetshenziswa yithina ukusiza ekuzuleni ukuzungeza iwebhusayithi futhi ukukhomba imithombo yethrafikhi yethu yewebhu.
_gid Okwesithathu I-Google Inc I-Google Universal Analytics yokulandela abasebenzisi nokulandela ithrafikhi kuwebhusayithi yethu Kusetshenziselwe ukukhomba ukuthambekela kwethrafikhi futhi kusisiza ukuba sithuthukise ukutholakala ngokulula kuwebhusayithi. Ihlala isikhathi esingaphansi kwamahora angama-24. I-ID eyingqayizivele evuselelwa ngenkathi upheqa iwebhusayithi.
_gat Okwesithathu I-Google Inc Kusetshenziselwe ukusiza amakhukhi weGoogle Analytics angenhla ngenkathi ephequlula ku-mobile.Persists izinyanga eziyisithupha
1.1 Amakhukhi abekwe ekhompyutheni yakho noma kudivayisi yakho ngokuvakashela i-Site Yethu. Ngokuvakashela isayithi lethu unikeza imvume yakho yokubekwa kwamakhukhi futhi usinika amandla okunikeza isipiliyoni esingcono kakhulu nokunikeza insizakalo.
1.2 Ngaphezu kokulawula esikunikezayo, ungakhetha ukunika amandla noma ukukhubaza amakhukhi esipheqululini sakho se-inthanethi. Iziphequluli eziningi ze-inthanethi nazo zikunika amandla okukhetha ukuthi ngabe ufuna ukukhubaza wonke amakhukhi noma amakhukhi wenkampani yangaphandle. Ngokuzenzakalelayo, iziphequluli eziningi ze-inthanethi ziyemukela amakhukhi kodwa lokhu kungashintshwa. Ngemininingwane engaphezulu, sicela ubheke imenyu yosizo esipheqululini sakho se-inthanethi noma imibhalo eza nedivaysi yakho.
1.3 Izixhumanisi ezingezansi zinikeza imiyalo yokuthi ungawalawula kanjani amakhukhi kuzo zonke iziphequluli ezijwayelekile:
3.a.2 IMicrosoft Internet Explorer:
3.a.3 IMicrosoft Edge: (Sicela wazi ukuthi ayikho imiyalo ethile ngalesi sikhathi, kepha ukusekelwa kweMicrosoft kuzokwazi ukusiza)
3.a.6 IMozilla Firefox:
I-3.a.7 Android: (Sicela ubheke imibhalo yedivayisi yakho yeziphequluli zabakhiqizi)
Izinguquko kule Nqubomgomo Yamakhukhi
1.1 Singaguqula le Pholisi Yekhukhi nganoma yisiphi isikhathi. Uma senza njalo, imininingwane yezinguquko izogqanyiswa phezulu kuleli khasi. Noma yiluphi ushintsho olunjalo luzokubopha kuwe ekusetshenzisweni kwakho kokuqala kwesayithi lethu ngemuva koshintsho olwenziwe. Uyayalwa-ke ukuthi uhlole leli khasi ngezikhathi ezithile.
1.2 Uma kwenzeka noma ngabe kukhona ukungqubuzana phakathi kwenguqulo yamanje yale Nqubomgomo Yamakhukhi nanoma yiluphi uhlobo lwangaphambilini (ama) toleo, izinhlinzeko zamanje nezisebenza zizosebenza ngaphandle kokuthi kuchazwe ngokuhlukile.
1.1 Uma ungathanda ukwazi kabanzi ngendlela esisebenzisa ngayo amakhukhi, sicela uxhumane nathi ku [Email protected] noma ngocingo ku-01323 332 838, noma ngeposi ku-2 Bromley Road, Seaford, East Sussex, BN25 3ES.
1.2 Ngemininingwane engaphezulu mayelana nobumfihlo, ukuvikela idatha nemigomo nemibandela yethu, sicela uvakashele okulandelayo:
I-Franchise eneMagiKats Tuition Centres ikunikeza ithuba lokwakha ibhizinisi elikhulu ngenkathi ubuyisela…
Joyina i-HITIO Gym Revolution I-HITIO Gym enikeza labo abafuna ibhizinisi labo elilandelayo lokuthile eliyingqayizivele ngokuhlanganisa…
IZIMEMO ZOKUZIVA ZAMAHHALA weBoutique zokutshala imali yabatshali bezimali abakha imali - Izindawo ezi-Prime ezitholakala kulo lonke elase-UK - Ukutshala imali okuphansi: vula ama-9Round amathathu…
I-Newborn Photography Franchise ngokubuyekezwa Kwamakhasimende weZimboni kanye ne-6 Figure Election Studios. Yini Uzothola Return okuqinisekisiwe On InvestmentProven…